musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Grand Canyon Jewels: El Tovar Hotel uye Hopi Gift Shop
Hotera & Resorts • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Hotera mu El Tovar
Makore zana negumi nematanhatu apfuura, matombo maviri ezvivakwa akavhurwa muGrand Canyon National Park: 95-makamuri El Tovar Hotel uye iri padyo neHopi House Gift Shop. Ose ari maviri airatidza kufanoona uye bhizimusi raFrederick Henry Harvey ane mabhizinesi aisanganisira maresitorendi, mahotera, mota dzenjanji dzekudyira, zvitoro zvezvipo, uye mapepanhau.
Kudyidzana kwake neAtchison, Topeka neSante Fe Railway yakaunza vashanyi vazhinji vatsva kuAmerican Southwest nekuita kuti kufamba kwechitima uye kudya kugadzikane uye kuve neruzivo. Ichishandisa maartist akawanda eNative-American, Kambani yeFred Harvey yakaunganidzawo mienzaniso yemabhasikiti ekuzvarwa, mabhedhi, zvidhori zvekachina, zvehari, uye machira. Harvey aizivikanwa se "Civilizer of the West."
Nguva refu iyo US Congress isati yasarudza iyo Grand Canyon National Park muna 1919, vashanyi vekutanga vakauya nepastagecoach uye vairara usiku hwose mumatende, makabhini, kana mahotera echinyakare ezvokutengeserana. Nekudaro, apo Atchison, Topeka neSante Fe Railway yakavhura spur yakananga kuSouth Rim yeGrand Canyon, yakagadzira kushomeka kwepekugara kwakakwana. Muna 1902, Sante Fe Railway yakaraira kuvaka kweEl Tovar, hotera yekutanga-yenhurikidzwa ina yakagadzirwa nemugadziri weChicago Charles Whittlesey ine makamuri angangoita zana. Hotera iyi inodhura $250,000 kuvaka uye yaive hotera yakanakisa kumadokero kweRwizi rweMississippi. Yakanzi "El Tovar" mukukudza Pedro de Tovar weCoronado Expedition. Pasinei nemararamiro ayo, hotera iyi yaive nejenareta remarasha raibatidza marambi emagetsi, kupisa kwemhepo, mvura inopisa uye inotonhora uye pombi dzemvura dzemukati. Zvisinei, sezvo pasina kana imwe yeimba yevaenzi yakanga ine imba yekugezera yega, vaenzi vaishandisa imba yekugezera yevoruzhinji pane imwe neimwe yeuriri huna.
Muhotera iyi maivawo neimba yegreen yekurimira michero nemiriwo minyoro, imba yehuku nemombe dzemukaka dzekupa mukaka mutsva. Zvimwe zvinhu zvaisanganisira imba yekugera, solarium, gadheni repamusoro-soro, kamuri yemabhiridhi, makamuri ehunyanzvi uye emimhanzi uye Western Union telegraph service muimba yekutandarira.
Ihotera itsva yakavakwa Grand Canyon isati yave yakachengetedzwa Federal National park zvichitevera kushanya kweMutungamiri Theodore Roosevelt muna 1903 kuCanyon. Roosevelt akati, “Ndinoda kukukumbirai kuti muite chinhu chimwe chete chine chekuita nazvo muchifarira zvenyu uye nechido chenyika- kuchengeta uku kunoshamisa kwezvisikwa sezvazviri iko zvino… Ndinovimba hamuzove nechivakwa chero rudzi, kwete imba yezhizha, hotera kana chero chimwe chinhu, kukanganisa hukuru hunoshamisa, hunyoro, kunaka kukuru uye kunaka kweCanyon. Zvisiye sezvazviri. Iwe haugone kuvandudza pazviri. "
Maresitorendi aFred Harvey akavakwa anenge makiromita 100 paSante Fe Railway kuburikidza neKansas, Colorado, Texas, Oklahoma, New Mexico neCalifornia. Akashanda mumaresitorendi nemahotera ake aine “Harvey Girls”, vakadzi vechidiki vakanyorerwa mhiri kweUS vaine “hunhu hwakanaka, dzidzo yegiredhi rechisere, tsika dzakanaka, kutaura kwakajeka uye chitarisiko chakanaka. Vazhinji vavo vakazoroora vafudzi nemombe uye vakatumidza vana vavo "Fred" kana "Harvey". Mutambi Will Rogers akati nezvaFred Harvey, "Akachengeta kumadokero mukudya nevakadzi."
El Tovar yakaiswa paNational Register of Historic Places musi waGunyana 6, 1974. Yakanzi iNational Historic Landmark musi wa28 Chivabvu 1987 uye inhengo ye Historic Hotels of America kubvira 2012. Hotera iyi yakatambira vanovheneka vakaita saAlbert. Einstein, Zane Grey, Mutungamiri Bill Clinton, Paul McCartney, pakati pevamwe vakawanda.
Hopi House Gift Shop (1905) yakavakwa kuti isanganise munzvimbo yakavakidzana uye yakatevedzerwa nedzimba dzeHopi pueblo dzaishandisa zviwanikwa zvemuno zvakaita sejecha nejuniper mukuvaka kwavo. Nepo El Tovar aifarira kuravira kwepamusoro, Hopi House yaimiririra kufarira kuri kubuda muSouthwestern Indian art uye mhizha inosimudzirwa neFred Harvey Company neSante Fe Railway.
Hopi House yakagadzirwa nemugadziri Mary Jane Elizabeth Colter achitanga kusangana neFred Harvey Company uye National Park Service iyo yakatora makore anopfuura makumi mana. Yakagadzirwa uye yakavakwa senzvimbo yekutengesa Indian artwork. Akakumbira rubatsiro rwevaHopi maartist kubva kumisha iri pedyo kuti vabatsire kuvaka chimiro. Colter akave nechokwadi chekuti zvemukati zvairatidza zvitaera zvekuvaka zvePueblo. Mahwindo madiki uye sirin'i yakaderera inoderedza kuomarara kwezuva remugwenga uye inopa kutonhorera uye kutonhorera kunzwa kune yemukati. Chivako ichi chinosanganisira niches yemadziro, nzvimbo dzemoto dzemakona, madziro eadobe, pendi yejecha reHopi uye atari yemhemberero. Chimuni chinogadzirwa kubva kuhari dzehari dzakaputsika dzakarongedzerwa uye dzakaunganidzwa pamwechete.
Apo chivako chakazarurwa, uriri hwechipiri hwakaratidzira muunganidzwa wamagumbeze ekare eNavajo, ayo akanga ahwina mubairo mukuru pa1904 St. Louis World’s Fair. Chiratidziro ichi chakazopedzisira chave Fred Harvey Fine Arts Collection, iyo yaisanganisira zvingangoita 5,000 zvidimbu zveNative American art. Muunganidzwa weHarvey wakatenderera kuUnited States, kusanganisira nzvimbo dzine mukurumbira dzakadai seField Museum muChicago neCarnegie Museum muPittsburgh, pamwe nenzvimbo dzepasi rese dzakaita seBerlin Museum.
Hopi House, ipapo uye ikozvino, inopa huwandu hwakasiyana hweNative American arts uye mhizha dzinotengeswa: midziyo yehari nemapuranga akarongwa pamakaunda akavharidzirwa mumagumbeze eNavajo akarukwa nemaoko, mabhasikiti akarembera kubva pamatanda akasvuurwa, zvidhori zvekachina, masks emhemberero, uye mifananidzo yemapuranga inovhenekerwa nechiedza chakakwana chemafafitera maduku-duku. Hopi murals inoshongedza madziro emasitepisi, uye zvigadzirwa zvechitendero chikamu cheimba yekunamatira.
The Fred Harvey Company yakakoka vashandi veHopi kuti varatidze maitiro avakaita zvishongo, ivhu, magumbeze, uye zvimwe zvinhu zvaizotengeswa. Mukutsinhana, vakagamuchira muhoro uye pekugara paHopi House, asi havana kumbove nemuridzi weHopi House uye vaisawanzobvumidzwa kutengesa zvinhu zvavo zvakananga kuvashanyi. Mukupera kwema1920, Kambani yeFred Harvey yakatanga kubvumira mamwe maIndia eHopi munzvimbo dzebasa mubhizinesi. Porter Timeche akapinzwa basa kuti aratidze kuruka magumbeze asi aifarira kutaura nevaenzi zvekuti aisawanzopedza gumbeze rekutengesa, ndipo paakazopihwa basa rekutengesa muchitoro chezvipo cheHopi House. Akazoshanda semutengi wemvumo yeFred Harvey kuGrand Canyon. Fred Kabotie, muimbi ane mukurumbira akapenda Hopi Snake Legend mural mukati meDesert View Watchtower, akatungamira chitoro chezvipo paHopi House pakati pema1930.
Kubva pamukurumbira weHopi House vashanyi vazhinji vangafunga kuti vaHopi ndivo chete dzinza rakaberekerwa kuGrand Canyon, asi ichi hachisi chokwadi. Kutaura zvazviri, nhasi madzinza 12 akasiyana anozivikanwa seane zvisungo zvetsika kuCanyon, uye National Park Service yanga ichishanda kuti igadzirise zvinodiwa zvetsika zvemamwe mapoka aya zvakare.
Hopi House yakasarudzwa seNational Historic Landmark muna 1987. Panguva yekugadziridza kwakakwana muna 1995, vanachipangamazano veHopi vakapinda mukuedza kudzoreredza uye vakabatsira kuona kuti hapana chepakutanga chekuvaka kana dhizaini chakachinjwa. Hopi House uye Lookout Studio zvivakwa zvikuru zvinopa muGrand Canyon Village National Historic Landmark District.
Mufananidzo we STANLEY
Stanley Turkel yakasarudzwa sa2020 Historian wegore neHistoric Hotels of America, chirongwa chepamutemo cheNational Trust for Historic Preservation, icho chaakambodaidzwa kunzi 2015 na2014.Turkel ndiye mupepeti wehotera akaburitswa zvakanyanya muUnited States. Iye anoshanda yake yekutarisisa hotera tsika achishanda sehunyanzvi chapupu mune zvine chekuita nehotera zviitiko, inopa asset manejimendi uye hotera franchising kubvunza. Iye anozivikanwa sa Master Hotel Supplier Emeritus neiyo Educational Institute yeAmerican Hotel uye Lodging Association. stanturkel@aol.com 917-628-8549
Ese aya mabhuku anogona kuodhwa kubva kuAuthorHouse nekushanya www.vashorganism.ru nekudzvanya pamusoro webhuku racho.